भारत सरकारको नेपाल भ्रमण: ‘नेपाल भारतविचको सम्बन्ध थप प्रगाढ पार्नकै निम्ति’ - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
Posted by Milap Subedi | १८ माघ २०७४, बिहीबार ११:१८ |
स्थानीय तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिसकेपश्चात मुलुक यतिखेर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि जोडतोडका साथ लागि परेको छ । नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट निर्मित वाम गठबन्धनलाई सत्तामा जान जनादेश भएको छ । यतिखेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा हेरिएको छ भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट पनि शुभकामनाका सन्देश तथा पटकपटकको फोनवार्ता भएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बहिर्गमित नुहँदै तथा नयाँ सरकार पनि गठन नभएको यो अवस्थामा भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराज र त्यहाँका प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमण असामान्य प्रकृतिको भएको विश्लेषण हुन थालेको छ । यसै विषयमा राजनैतिक विश्लेषक डा. लोकराज बरालसँग हेडलाईन नेपालले गरेको विशेष कुराकानी ।
आज र भोली भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा छिन । जसलाई भारतले उच्च राजनैतिक भेटवार्ता भनेको छ । अहिलेको सरकार बहिर्गमन नहुँदै र नयाँ सरकार गठन नहुँदैको यो उच्चस्तरिय भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो सामान्य रुपमा नै हो, किनकी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले तीन शीर्ष पार्टीका प्रमुखहरुलाई २र२ पटक फोन गरेको, फेरी अहिले बन्न लागेको नयाँ सरकारका सम्भवत भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्को पटक पनि फोन गरिसक्नुभएको छ । यसले पनि के देखाउँछ भने भारत सरकारले राम्रो सम्बन्ध कायम गर्न, विगतका तिता कुराहरु विर्षंदै सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्न, चाहेको देखिन्छ । त्यसै शीलशीलामा अहिले सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठाउने निर्णय गरेको हो जस्तो देखिन्छ ।
अघोषित नाकाबन्दि र संविधान जारी गर्ने सन्दर्भदेखि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको र भारतको संस्थापन पक्षको बिचमा अरु नेताको त’लनामा सम्बन्ध चिसो हुँदै आएको एक किसिमको विश्लेषण पनि हुने गरेको थियो । र अहिले भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा मोदिको फोन आउनु, उच्च स्तरिय भेट पनि भनेको छ ।
सम्बन्ध सुधार्ने चाहना ओलीको हो कि मोदीको ?
विषेशगरी यो दुवै तिरको चाहना हो । भारतले के महसुस गर्यो भने नाकाबन्दि लगाउनु गल्ति थियो भन्ने भो । नेपालको पनि चाहना हो । ओली चिन मुखी भए, भारत विरोधी भए भन्ने जुन आरोप थियो, त्यसलाई हटाउनका निम्ति ओलीको चाहना हो । अस्ति पठाएको चिठिमा पनि सोहि उल्लेख छ । उहाँले भारतसँग सम्बन्ध सुधारेर सहकार्य गर्न आफु आत्तुर रहेको बताउनुभएको छ ।
निर्वाचनपछि वाम गठबन्धन को जित र ओली अबको प्रधानमन्त्री भनेर जसरी हल्ला गरियो, भोलिका दिनमा चिन हावी नहोस् भन्नाका लागि हो त यो सब ?
यो स्वभाविक नै हो । धेरै भारतविरोधी धारणा हुनु राम्रो होईन । पाकिस्तानसँग भारत मिल्नै गाह्रो छ यतिवेला । त्यसकारण पनि छिमेकिहरुसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । बंगलादेश नेपालसँग भारतको सम्बन्ध धेरै किसिमले बाँधीएको छ ।
त्यसकारण यो स्वभाविक कुरा हो । भारतले अरु कुनै छलफल गर्ने भन्ने बताएको छैन । त्यसैले हामीले यो भेटघाट विश्वासकै लागि भएको हो, सम्बन्ध सुधारकै लागि भएको हो भन्ने अनुमान लगाउन सक्छौं । अनि अनुमानमा हिन्दुराज्यको पनि चर्चा छ, यो पनि अनुमान गर्न सकिन्छ । लुकेको एजेण्डा चाहिँ यो पनि हो कि जस्तो लाग्छ ।
सुष्मा स्वराज भ्रमणमा आएपछि शीर्षस्थ नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्ने भन्ने कुराहरु आएका छन् , यो भ्रमण नयाँ सरकार बन्नुअघि नै हुँदै छ त्यसले गर्दा यो भ्रमण कहिँ कतै सत्ता परिवर्तनसँग त जोडिँदैन ?
यतिबेला आएर सत्ता परिवर्तनसँग भ्रमण जोडिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन । प्रचण्डले आफ्नो लाईन स्थीर राख्नुपर्यो, उहाँ नै अहिले बिचमा हुनुहुन्छ सत्ता सन्तुलन गर्ने नगर्ने भन्ने कुराको लागि । यति चाँडै प्रचण्डले विचार बदल्नुहोला भन्ने लाग्दैन । त्यसकारण अहिले हेर्दा २ वटै पार्टी एक नभएपनि सरकार बनाउने कुरामा उहाँहरु एक हुनुहुन्छ । त्यसकारण तलमाथि होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
भारतले नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर बुझ्न सक्छौं ?
नेपाललाई भारतले सधैं उच्च प्राथमिकतामा नै राखेको छ । यति नजिकको छिमेकी हो नेपाल, त्यसकारण पनि उच्च प्राथमिकतामा त राख्नै पर्यो नि । पहिलेदेखि नै हेरौं न, जहिल्यै उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।
अहिले सम्भावित प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई हेरिएको छ । यस्तै, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छ कि ?
राजनीतिमा सम्भावना भन्ने कुरा भै नै हाल्छ । प्रचण्डको टार्गेट कि प्रधानमन्त्री कि त अध्यक्ष । अहिले हेर्दा ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन्, यसैमा पार्टी एकताको गाँठो कँसिएको छ । २ ओटामा एउटा पनि भनए त माओवादी किन जाने ? त्यसकारण अपहले तुरुन्तै यो मिलीहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन, तर सरकार बनाउने कुरामा चाहिँ कुरा मिल्छ ।
Previousकार दुर्घटनामा एनबीए हिरो बटलरको मृत्यु
Nextप्रदेश ३ को प्रदेशसभा पहिलो बैठक बस्दै
नेपाललाई समृद्ध बनाउन युवापुस्तालाई अघि सार्नुपर्छ : मोदी
२९ बैशाख २०७५, शनिबार १४:३७
पहिलो चरण चुनाव : प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाई सकियो
१९ कार्तिक २०७४, आईतवार १७:३३
एएफसी सोलिडारिटी कप अन्तर्गत समूहको अन्तिम खेलमा नेपालले ब्रुनाइसँग खेल्दै (लाईभसहित)
२३ कार्तिक २०७३, मंगलवार १७:१८
नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसको छैटौँ महाधिवेशन सुरु
२९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार १६:४७